I-Archivellan Federal Archive - Amalungelo Abantu Nezithombe Zokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
04 uJan 2016
Ukuthuthukiswa kwesofthiwe yokusiza ngokuzenzekelayo
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 4. January 2016
Usizo lwe-swarmream lwangaphakathi. Isofthiwe yokuxhumanisa izenzo ezenzakalweni zomphakathi
Ngokufakwa kwesofthiwe yePixelHELPER Livestream Schwarmhilfe kwisayithi eNyakatho ye-Afrika, sidale amaqiniso ekuhlolweni kwensimu yephrojekthi yethu. Manje singakwazi ukusebenza ezinkingeni zezwekazi lase-Afrika ngesofthiwe yethu yosizo. Sakhele izindawo zokusebenzela ezihlukahlukene zokuxhumana emsebenzini wethu wokukhiqiza wokuxhumana. Isitolo sokuthunga, isiteshi se-welding, i-bakery, i-algae yokuzalanisa, amakhilomitha angu-3 wezintambo zenethiwekhi zixhuma amakhamera we-20 ndawonye ukubonisa ababukeli bethu njalo izithombe zokugcina zokukhiqiza bukhoma.
Umthwalo wekhamera we-15 wamakhamera wekhamera ngemuva nangenhloko yekhamera ye-360Grad ne-Wlan
Ukuvakasha kwePulazi kunzima kakhulu, okuncane kakhulu ukuqashisa kepha ukuthengisa kuphela
Isikhwama se-23.06.18 isobho saseMorocco
Sithumelela ikhishi lethu leSobho Lokuthuthukiswa kwabantu abalambile be-600 eMorocco. Ikhishi lisendaweni yamasonto amabili futhi kusadingeka siqale, izindleko zilinganiselwa ku-400 €. Inqola ye-orange namathuluzi we-Spirulina Farm yethu isivele eseMarrakech. Njengamanje sifuna ipulazi ukwakha i-Spirulina Farm. Ngenxa yesamba semali esincane esiphathelene neminikelo ye-2500 ngonyaka ngonyaka we-2017, singaqhubeka kancane kancane kule phrojekthi. Silindela ukuqasha okungenani i-600-1200 € kuye indawo yepulazi. Njengoba thina okusheshayo 4G Inthanethi kudingeka epulazini esinakho ukwenza ukuhlolwa ijubane indawo ngayinye, njengoba thina kamuva lapho okungenani 20 yangaphakathi amakhamera IP egijima, bese uthumela ukusakaza zangaphandle ezimbili ku-Facebook kanye Twitch.
Impendulo enkulu ukuthi kunezimboni ezimbalwa kakhulu ezingatshalwa phezulu neminqumo, kodwa zinezikhala ezivulekile negesi namanzi.
Sibhekile kakade emapulazini e-10 futhi kuphela okufanelekile ukudayiswa kwe-80.000 € enikeziwe hhayi ngokuqashiswa.
Amasiko we-18.06.18 asabamba ikhishi, amathangi alula ukuthekelisa
Izibalo zamanje nokutshalwa kwezimali
Njengamanje sitshale imali mayelana ne-25.000 € ngamathuluzi we-Spirulina Farm kanye no-25.000 € ezindleko zokungena, ukuthenga imoto nokuletha imishini yethu eNyakatho Afrika.
Sidinga usizo lwakho ngokushesha ukuze uthumele i-24 i-livestream ihora kusuka eMorocco. Ngokushesha nje lapho i-Spirulina Farm isebenza, sizoshayela ikhishi lethu lesobho ngesitimela se-Defender eSenegal. Akufanele yini sithole imvume yokuhlala unomphela eMorocco sizoqhubekela phambili eningizimu ukuya eMauritania, eSenegal naseGambia futhi sizame khona
ukuthola indawo ne-Daueraufenthalsememigung. Kusobala ukuthi kulula ukuthumela amathangi e-Afrika kunempahla yokusiza abantu.
Ubunjiniyela bokusebenza kagesi ukunikezwa kwamandla ezincwadi zamabhuku ezinkundleni zethu
Amakhamera we-360 ebangeni elincane leselula. Ukuxhumeka kwe-Wi-Fi emotweni ngokusetshenziswa kweselula ngaphandle
11.05.18 Defender & Caravan ukugcina izindleko ezingaphansi kakhulu e-Afrika
Isibonelo sokukhiqizwa kwe-hose yi-Spirulina ukuze singakhi izitsha ezikhonkolo
Humanism njengenhlangano sipiliyoni ukusakaza LIVE, bethonya ukusatshalaliswa phezu izithonjana Facebook. Ama-Zombies azi noma yibuphi ubuhlanga, umbala noma inkolo. The Zombies without Borders iphrojekthi, ubona ngokwaso njengoba interactive asizayo platform Swarm. Igama yilona bheke a sebuningini amakhompyutha zombie angaphandle elawulwa. Umgomo wethu ukubaqeda onesixazululo sazo zonke izinhlekelele zezenhlalakahle ngokusebenzisa usizo interactive lababukeli ku ukusakaza bukhoma. Umgomo wethu: 24 ihora ukusakazwa bukhoma kwe-amandla omlilo Punken emhlabeni. Ehamba izintatheli kuzo impi, zezenhlalakahle usizo ukusatshalaliswa emakamu ababaleki noma ukuzingelwa eKruger National Park, amathuba ethu ukulawula uswebezane kukhona Boundless Ithuluzi lethu: I izithonjana zomhawu Facebook ukulawula uswebezane asizayo futhi unqume ukuthi kwenziwa.
Umgomo Zombies without Borders, Ngakho-ke ezindaweni eziningi ezweni nobuchwepheshe athuthukiswe, kuhlanganise ibhethri Tragekraxen mobile; I-RTMP Facebook bukhoma ukulawula izilawuli zangaphakathi engenantambo ikhamera, i-software interactive semininingwane ukulawula uswebezane, izengezo namaqembu amakhulu wabantu ngezinhloso ezinhle nge isiphequluli ukuze baxazulule izinkinga ezinkulu isikhathi.
Izindawo zokuqala ze-livestream ziseSenegal, ePalestina kanye ne-logistics yethu eMorocco. I-PixelHELPER ifuna ukunikeza wonke amanye amazwe ngezinsiza zokusiza ezivela endaweni yaseMorocco. Endleleni eya eMadagascar, sifuna ukufaka okungenani indawo eyodwa yama-livestream ezweni ngalinye. Izindawo ze-Livestream zizokwakha amathuba okuqashwa njengensimu ye-algae & ukukhiqiza imikhiqizo kanye nababaleki ukuba banikeze ikusasa elihle kuleli zwekazi lase-Afrika. Konke ku-livestream, uhlale ukhona futhi unqume ukuthi kwenzekani. Indawo ngayinye izoboniswa e-livestream phakathi nosuku, ithelevishini ehlangene ngenhloso yokuthuthukisa umhlaba ngokusebenzisa usizo lwe-swarm. EMadagascar, sifuna ukusebenzisa i-Georgian phage therapy ukuze sivikele abantu besifo sephaphu esiphume khona lapho minyaka yonke. Ngokukhulekela kwabafileyo, izakhamuzi zesiqhingi zihlangana ngokuphindaphindiwe nezinambuzane ezivele zibulala izigidi zabantu eYurophu eNkathini Ephakathi.
Ukusebenza kwangempela kwesikhathi sesikhathi sangempela ekusakazeni ividiyo bukhoma kusiphequluli sakho.
Ngokweqile, isebenza ukuze siqale i-livestream ngokulawulwa okusobala bese simema "izisebenzi zeZombi" ngaphandle kokulinganiselwa "kubasebenzi bethu be-livestream. Ngakho-ke sihlala siqaphele ukulandelana kwezilawuli zokuxhumana futhi sisabele masinyane ekushintsheni ku-livestream endaweni yenkinga.
I-2014-2015 siqoqe isipiliyoni sokuqala ngosizo lwe-livestream we-swarm
Isithombe se-copyright: https://web.facebook.com/patryk.witt
I-Graphics & I-Logo: https://web.facebook.com/SNOB.desillustration
Ukuthuthukiswa kwesofthiwe yokusiza ngokuzenzekelayo Ngo-February 3rd, i-2019Oliver Bienkowski